Ciidamada Soomaaliya iyo AMISOM oo qorsheynaya iney u dhaqaaqaan Ceeldheer iyo Galhareeri – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Saraakiisha ciidamada Soomaaliya ee ku sugan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in iyagoo fulinaya amarka madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan halkaas booqday ay weerar ku qaadi doonaan degmooyinka Gal-hareeri iyo Ceelbuur oo ka tirsan gobolkaas, islamarkaana weli Alshabaab maamulaan.
Taliyaha milateriga Soomaaliya ee Ceel-buur, Maxamed Kaariye Caraale ayaa u sheegay KNN in markii hore qorshaha ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ahaa iney gaaraan Ceeldheer iyo Gal-hareeri, sidoo kalana uu amarkaas dhawaan bixiyey madaxweyne Xasan Sheekh, ayna fulin doonaan.
“Alshabaab waxey hadda ku dambeeyaan oo kaliya Ceeldheer, Gal-hareeri iyo Bargaan, annaguna halkaas ayaan ku jeednaa oo waxaan oofineynaa balanta madaxweynaha ee ah in Alshabaab dhulkaas laga saaro, kuwa xabadda ridaya waa kuwii dhulka u dhashay oo wayey meel ay aadaan,” ayuu yiri Maxamed Caraale oo aan sheegin xilliga ay u dhaqaayaan labadaas degmo.
Alshabaab ayaa markii laga saaray degmada Ceelbuur waxey saldhigyo ka sameysteen degmooyinka Ceeldheer oo ku rakibteen Radio Alandalus oo afkooda ku hadla iyo degmada Gal-hareeri oo ay ka abaabulaan weerarada ay ku qaadaan ciidamada ku sugan agagaarka Ceel-buur iyo Ceel-garas.
Dhanka kale, dagaalo xoogan oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda, AMISOM iyo Al-Shabaab ayaa xalay ka dhacay deegaanka Ceel-Garas ee Gobolka Galgaduud, iyadoo dagaalkan uu ka dhashay dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyadii dagaalamayay.
Sida wararku sheegayaan dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ayaa weearar ku qaaday fariisin ay ciidamada ku lahaayeen Ceel-garas, waxaana warar kala duwan ka soo baxayaan qasaaraha ka dhashay.
Afhayeen u hadlay ciidamada dowladda ee ku sugan Galgaduud ayaa sheegay inay ka hor-tageen weerar Al-Shababa ku soo qaadeen, isla markaana ay jab xoogan gaarsiiyeen.
Waxaa uu sheegay in ilaa 6 meyd ay uga carareen deegaankii lagu dagaalamay, haatana ay baadigoobayaan kuwa kale oo la sheegay inay duurka ku jiraan.
Madaafiicda la isku adeegsanayay dagaaladaas ayaa xalay oo idil laga maqlayay deegaano ka mid ah Gobolka Galgaduud, waxaana dagaalada ay ahaayeen kuwo dhowr jeer dhacay.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki Moon oo laga sugayo Muqdisho